महाभूकम्पको चर्कोमा, भयो अलिनो :: Press Chautari ::
महाभूकम्पको चर्कोमा, भयो अलिनो
एनआरएन अमेरिकाको चुनावी परिणाम
न्युयाेर्क, २८ अप्रिल, २०१५ ।
मातृभूमी नेपालमा गएको महाभूकम्पको झड्काले यता अमेरिका प्रवासमा रहेका नेपालीहरुको संस्था एनआरएन एनसीसी अफ युएसएको चुनावी परिणाम छायाँमा पर्यो । ठूलो तामझाम र भाइरलका साथ सम्पन्न चुनावको परिणामपछि अहिले जे जस्तो परिदृश्य देखिएको छ त्यसले जित्नेहरुको खुशी खल्लो भएको छ भने हार्नेहरुलाई राहत मिलेको छ । आमसञ्चारमा यस्ता घटनाहरु अनेक पटक भएका छन् जसबाट समाचारहरु छायाँमा परेर या पारेर स्याटलाइट न्युजको कित्तामा पुग्छन् । ठूला माछाले साना माछालाई खान्छ भनेझैं आमसञ्चारको संसारमा पनि ठूला समाचारले साना समाचारलाई खाइदिदा यस्तो हुने गर्छ । समयक्रममा एनआरएन एनसीसी अफ युएसएको चुनावी परिणाम पनि यस्तै एउटा स्याटलाइट न्युज बन्न पुगेको छ ।
नेपाली समाजमा एउटा बहुचर्चित भनाइ छ, ठूलो माछाले सानो माछालाई खान्छ । यो भनाइ मात्र हैन, यथार्थ पनि हो । शान्त र निदोर्ष प्रकृतिको माछाको आहार चक्रलाई हेर्दा यो भनाइ हुबहु लागू हुन्छ । अर्थात्, ठूलो माछाले सानो माछालाई नै खाइदिन्छ । यसलाई विकासवादी वैज्ञानिक चाल्र्स डार्विनले सर्भाइवल अफ द फिटेस्ट सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर बाँच्नका लागि संघर्षको नयाँ आयाम प्रस्तुत गरिदिएका छन् ।
आमसञ्चारको संसारमा पनि यो भनाइ उतिकै लागू हुन्छ । अर्थात्, ठूला समाचारका अगाडि साना समाचारहरु दब्छन् या किनारा लाग्छन् । यस्ता दबिएका समाचारलाई आमसंचारमा स्याटलाइट न्युज भन्ने चलन छ । कहिलेकाही स्वभाविक रुपमा ठूला समाचार आएर साना समाचारहरु स्याटलाइट न्युज बन्छन् भने कहिलेकाँही मिडियाले आफ्नो इच्छको अर्को समाचारलाई प्रमुख बनाइ दिएर पहिलो समाचारलाई जबर्वस्ती किनारा पनि लगाइदिन्छ । अझ कहिलेकाँही त त्यस्ता समाचारलाई ब्ल्याकआउट नै गरेर मिडियाले स्टोनवालिंगको बदला पनि लिने गर्छ । आमसञ्चारमा समाचार नै सम्प्रेषण नगर्नुलाई ब्ल्याक आउट र कहिलेकाँही समाचार स्रोतले सञ्चार माध्यमलाई नजरअन्दाज गर्ने कुुरालाई स्टोनवालिंग भनिन्छ । आमसञ्चारमा ब्ल्याकआउट र स्टोनवालिंगलाई जस्तालाई तस्तै भनिन्छ । यस्तो काम सामान्यतः सञ्चार माध्यमले नियोजित तवरले एजेन्डा सेटिंगअन्तर्गत नै गर्ने गर्छ ।
आमसञ्चारको संसारमा ब्ल्याकआउट, स्टोनवालिंग र एजेन्डा सेटिंगका लाखौं साना ठूला उदाहरण पाइन्छन् । यस्तै एउटा उदाहरण बनेको छ, एनआरएन एनसीसी अफ यूएसएको निर्वाचन । ठूलो तामझाम र भाइरलका साथ सम्पन्न चुनावको परिणाम भने छायाँमा पर्यो । अर्थात्, यो चुनावको परिणाम सँगसँगै नेपालमा विनाशकारी महाभूकम्पले आफ्नो ताण्डव देखायो । आफ्नो मातृभूमीमा आइपरेको विपतले सिर्जना गरेको दुःखको भीमकाय समाचारका अगाडि प्रवासमा सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम पूर्णतः छायाँमा पर्यो । र, यो एउटा स्याटलाइट न्युजको अर्को ठीकैको उदाहरण बन्न पुग्यो ।
एनआरएन एनसीसी अफ युएसएको चुनावमा कसले जित्यो भन्ने सम्मको हार्ड न्युजले त ठाउँ पायोे तर पर्दा पछाडिको समाचारका लागि विश्लेषण गर्ने खालका सफ्ट न्युजका लागि कुनै ठाउँ नै रहेन । यसले गर्दा जित्नेहरुको खुशी खल्लो भयो भने हार्नेहरुलाई सान्तवना मिल्यो । यो सँगै अरु प्रश्नहरु पनि थाती रहे । जस्तो कि, आइसीसी सदस्यका लागि स्थगित गरिएको चुनावको झ्याउलो आफैं छायाँमा परेर यसबाट निर्वाचन आयोगलाई राहत मिल्यो । चुनाव आचारसंहिता लागू भैसकेपछि पनि त्यसको अवज्ञा गर्दै सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन दिने उम्मेद्वार र विज्ञापन निकाल्ने मिडियाको सम्भावित टाउको दुखाइ पनि उत्रियो । चुनावको परिणामलाई लिएर एकले अर्कालाई गर्ने भद्दा गाली र आक्षेपको ठाउँ रहेन । यसबाट राहत पाउनेमा नेपाली कांग्रेस र एमालेका लागि अमेरिकामा राजनिित गर्ने भातृसंगठनका नेताहरुलाई हाइसञ्चो भयो । एनआरएन एनसीसी अफ युएसएमा आदिवासी जनजातिको उपस्थिति लगभग शुन्य हुँदा पनि अमेरिकामा रहेका आदिवासी जनजातिका नेताहरुले जवाफ दिनु परेन ।
हुन त यो अहिलेका लागि थाति राखिएको विषय पनि हुनसक्छ । र, महाभूकम्पको प्रभाव कम भएपछि सपथग्रहण र कार्यभार सम्हाल्ने बेलामा यसले फेरि टाउको उठाउन सक्छ । यद्यपि, अहिले तावा तातेको बेला त्यसको जे जस्तो प्रभाव हुन्थ्यो, सेलाए पछि त्यही मानकमा तताउन भने गाह्रो मात्र हैन, लगभग असम्भव नै हुन्छ । यद्यपि, चुनावको परिणामलाई लिएर यथासमय र यथास्थानमा त्यसको गम्भीर विचार विमर्श हुन्छ र हुन पनि जरुरी छ ।
सरसर्ती हेर्दा परिणामले के देखाइदियो भने हाम्रोमा चुनाव भन्ने वित्तिकै राजनीति हो र नेपाली राजनीतिमा अझै पनि इस्युभन्दा इजमकै बोलवाला छ । एनआरएन एनसीसी अफ युएसए जतिसुकै गैरराजनीतिक संस्था भने पनि यसमा संलग्न व्यक्तिहरुको राजनीतिक आस्था र त्यसको भद्दा प्रदर्शनले यो सारमा गैरराजनिितक संस्था रहेन र हुने कुरा पनि थिएन । यसको माउ संस्था एनआरएन आइसीसीकै चुनावमा पनि अन्तिम बेलामा राजनीतिक जोडघटाउ हुने गरेको जगजाहेर नै छ । हो, यस्ता संस्थाहरु गैरराजनिितक चरित्रका हुन् भन्ने हामीमध्ये कतिको प्रिय चाहना हुन सक्छ । तर, सबै प्रिय चाहना पूरा हुन्छन् नै भन्ने केही हुदैन ।
चुनावमा जति नै गैरराजनीतिक र व्यक्तिगत प्रतिप्रस्र्धा भने पनि यसमा राजनिितक जोडघटाउ थियो नै । त्यसमा पनि अहिले विजयी डा. केशव पाैडेलकाे त लगभग प्यानल नै थियो । अहिले विजयीहरुको नामावली हेर्दा सबै त्यही प्यानलकै विजयी भएको अवस्था हो । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन नजिक रहेको यो प्यानललाई केही समयअघि टेक्सासमा सम्पन्न नेपाली जनसम्पर्क समितिको चुनावमा पराजित पक्षले बोकेको थियो । यता, जनसम्पर्कको संस्थापन पक्षले कसैप्रति इन्डोर्समेन्ट नगर्ने घोषित नीति लिए पनि यसका अधिकांश हर्ताकर्ताहरु नगेन्द्र पौडेलको पक्षमा थिए । यसरी हेर्दा यो चुनाव कांग्रेस समर्थित र वागी कांग्रेस समर्थित थियो । र, टेक्सास अधिवेसनमा भएको हारको वदला लिदै जनसम्पर्क समितिको अल्पमत पक्षधरले बाजी मारेको स्थिति जस्तो देखिएको छ । तथ्यसहितको यस सत्यले के उजागर गर्छ भने अमेरिकामा नेपाली कांग्रेस समर्थित एनआरएनकै बोलवाला छ । त्यसपछि दोस्रो नम्वरमा एमाले समथृकहरु रहेका छन् । यस निर्वाचनमा पनि एमाले समथिृत प्रवासी मञ्चका उम्मेद्वार गणेश कुँवर निकटतम प्रतिस्पर्धी रहे । र, आफूलाई तटस्थ भन्न चाहनेहरु जसको राजनिितक आस्था कुनै बेलाको पञ्चायतसँग नजिक थियो, परिणामको तल्लो पंक्तिमा उभिए । पूर्वीतटले डंका पिटेको चुनावमा पश्चिम तटका दुर्गा दाहाल सबैभन्दा पुछारमा पुगे ।
यो परिणामलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्ने हो भने एनआरएन एनसीसी अफ युएसएको चुनावमा मूलतः एजेन्डाभन्दा पनि राजनीति नै हावी रह्यो । अहिले जितेकाले चुनावमा राजनीति नै गर्छु नभने पनि राजनीतिभन्दा टाढा हुन नसक्ने कुरा मुख खोलेरै भनेका थिए । र, जसले राजनीति नगर्ने भनेका थिए उनीहरु बडारिए । यसले के संकेत गर्छ भने अमेरिकाको एनआरएनमा राजनीति हुनछ र त्यसैलाई मतदाताले पनि मान्यता दिन्छन् ।
यसपालीको अमेरिकी एनआरएनको चुनावमा राजनीति मात्र हावी भएन, पैसा पनि त्यतिकै निर्णायक देखियोे । मत किन्नैलाई त हैन, तर चुनावी क्याम्पेनका लागि पनि निक्कै ठूलो खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो, गरियो । यो खर्चको ग्राफमा सुरुदेखि नै माथि रहेका डा. पौडेल नै अन्ततः मतको ग्राफमा पनि अब्बल देखिए । जसले खर्च गर्न सकेनन्, उनीहरुको सम्भावना पनि त्यत्तिकै खुम्चियो । बल्कका मत बनाउनेहरुको हल्ला त चल्यो तर त्यो त्यति कामयावी देखिएन ।
चुनावको परिणामले फेरि पनि अमेरिकाको एनआरएनमा कसरी सबै सोच, कोण, भूगोल र समावेसी चरित्रलाई समेट्ने भन्ने कुरा थप पेचिलो बनेर देखा पर्यो । नेपाली कांग्रेस त्यसमा पनि सत्तारुढ गुटकै मान्छे मात्र चुनिएर आएपछि यसमा अरु पक्ष समेटिने भन्ने वैधानिक बाटो पनि रहेन । मतदाताले त्यो किसिमको विवेक देखाउन नसक्दा सिर्जना भएको परिस्थिति हो यो ।
यता अमेरिकी एनआरएनमा राजनीति हाबी भए पनि एनआरएन आइसीसी भने तुलनात्मक रुपमा कम राजनैतिक चरित्रको रहदै आएको छ । यसले गर्दा फेरि पनि एनआरएन आइसीसीसँग यसको वेभलेन्थ त्यति मिल्ने खालको देखिदैन । अमेरिकी एनआरएनका लागि यो पनि एक किसिमको सेटब्याक नै हो । एनआरएन अभियानमा सुरुदेखि नै अमेरिकाको प्रभावकारी उपस्थिति हुन सकेको छैन ।
जे होस्, विश्वकै एक मात्र महाशक्ति राष्ट् अमेरिकामा पनि नेपाली जातिको बढ्दो उपस्थिति र गतिविधिको साक्षी बन्दै एनआरएन एनसीसी अफ युएसएको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यसले भलै राजनीतिक चरित्रको चुनावी चिन्ह प्रस्तुत गरे पनि सबैलाई समेटेर अघि बढ्न यसले गैरराजनीतिक चरित्र अंगिकार नगरी धरै छैन । समयले दिएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण शिक्षा पनि यही नै हो ।
कसले कसले जिते ?
अध्यक्ष : डा. केशव पौडेल
वरिष्ठ उपाध्यक्ष : कृष्ण पोखरेल
उपाध्यक्ष : रविना थापा , वन्दना कोइराला, डिल्लीराम भट्टराई, रामचन्द्र पोखरेल
महासचिव : तिल बहादुर श्रेष्ठ
सचिव : शंकर श्रेष्ठ
सहसचिव : संगीता लम्साल सिवाकोटी
कोषाध्यक्ष : वेदराज बस्नेत
सहकोषाध्यक्ष : प्रकाश सापकोटा
गोमा सेन, सूर्य लम्साल, हरिश्चन्द्र हमाल, मोहनबहादुर ज्ञवाली, विनोद तिवारी
शिवराज पौडेल, विष्णुमान प्रधान, गोविन्द श्रेष्ठ, सतेन्द्र शाह, सुशील रेग्मी
बुधवार, २०७२ बैशाख १६ गते २०:०३ / Wednesday, Apr 29, 2015 8:03 pm